UDAVID BOWIE: PHILA: SANTA MONICA '72 UKUJONGWA KWEALBHAMU - IINDABA
Phila: Santa Monica '72
Kudala ithathwa njengoyena mboniso ubalaseleyo kaDavid Bowie orekhodiweyo, lo msebenzi ka-1972- ofumana ilivo esaziva indlela yakhe ukuya kubuqaqawuli- ufumana ukukhutshwa kwe-2xCD kunye nevinyl.
Kubonakala kumnandi ngoku ukucinga ukuba imiboniso eshicilelweyo ngokungekho mthethweni yayiyeyona ntshaba inkulu yokurekhoda. Kwezi ntsuku ii-bootlegs- ngakumbi ii-bootlegs ezinje nge-Bowie ka-Okthobha ka-Okthobha u-1972 gig eSanta Monica, eyonwabela isidanga sabalandeli- ayilotshaba, bangumsinga wengeniso osikelelekileyo. USanta Monica '72 Inqanaba lokukhutshwa ngokusesikweni ngaphambili, kodwa le nguqulo iphinde yafakwa kwakhona kwaye ayinasiphelo: Ithuba labalandeli abaqhelekileyo lokufumana amava ekuthiwa yeyona nkqubo ibalaseleyo yeBowie erekhodiweyo.
Ngeveki entsha ingoma entsha
Thelekisa ngokucacileyo USanta Monica '72 ngu UZiggy Stardust: Imifanekiso eshukumayo : ukhenketho olufanayo, kodwa uxwebhu olwahluke kakhulu. Eli cwecwe nguDavid Bowie ubuyela eBritane njengegorha elinqobileyo (kwaye uyamangalisa abalandeli bakhe ngokuthatha umhlala-phantsi) - lo umfumana ekude nekhaya kwaye esaziva eyindlela. Ukubukeka kweZiggy kunye nomxholo- i-jumpsuit, ukothuka kweenwele ezibomvu, i-sci-fi glam rock- yayikhabe iingcango zivulele uBuyie eNgilane, kodwa ifuthe layo e-USA lalingekabi lukhulu kangako. USanta Monica '72 sisandi sesenzo senkolo esityhala nzima ukuze siphumelele.
I-Bowie yayineenzuzo ezimbini ezinkulu kolu tyando: Ibhendi exhasayo ekhethekileyo kwizigcawu ezivela eMars, kunye neealbhamu ezine ezixabisa izinto ezahlukileyo. Umdibaniso wamvumela ukuba abeke umboniso onokwakha kunye nokujija ukugcina abaphulaphuli bawo bevuselelekile. Ukuba uqhelene Imifanekiso eshukumayo , Uyazi ukuba iingoma zayo ezicothayo ziye zilahleke kwisiphelo sendalo, kunye nepiyano kaMike Garson ngakumbi ukubandezeleka. Vula USanta Monica '72 , nangona kunjalo, i-Garson ivakala ngathi isondele kwaye iyasebenza njengaso nasiphi na iSigcawu kwindawo esecaleni ye-acoustic esekwe kwirekhodi eqaqambisa ukutshisa.
Phambi kokuba iSigcawu sibeke indawo yazo etafileni ngokukhawuleza 'Zibambelele kuwe' kunye nengxolo 'yeZiggy Stardust'. Kodwa 'i-Supermen' - umbono ongafumanekiyo kaBuyie woothixo bexesha elizayo- kulapho le albhamu iqala khona ukunyibilika. Ibhulorho eya kwinqanaba lokuthula, yomelele kwaye ayaziwa apha kunakuqala Indoda eyathengisa umhlaba , kunye nemifanekiso ephazamisayo kaBuyie kunye nokufiphala kukaMick Ronson kwekatala yomqolomba edlala ngokunyanzelana. 'I-Supermen' idala imo yengozi engaqhelekanga ethwala imvumi ngokuqatha ithathe 'Iminyaka emihlanu' kunye 'noBomi kwiMars?', Kwaye iqinisekise 'i-Space Oddity' igcina amandla nokuba uBowie esenza ingxolo ngokwakhe. U'Andy Warhol 'uyindawo emileyo, evala ngengoma ecekethekileyo, emva koko u-Bowie egqiba kwelokuba abalise ibali elingaqondakaliyo malunga nelobster kunye nomthi wesundu. Isihlwele kunye nomculi bahleka ngokuxhalabisayo: Kuyathandeka, ngokunikwa igama likaBuyie njenge-showman kunye ne-manipulator, indlela gauche lonke inqanaba lakhe le patter kule diski izandi.
inkanuko yentlungu kunye nokubulawa kweedemon
Ukuzithemba kwengoma ka-Bowie kunye nomyalelo, nangona kunjalo, awunampazamo. Ubungqina be-rock-art bungqinwe emva kwemizuzu eli-10 'Ububanzi besangqa', isiqingatha sesibini somboniso yindawo evuyisayo yokuphakamisela phezulu, uhlobo olwaqala udumo lukaBowie kwangoko. URonson uliqabane elilinganayo, ugcina u-'Kumkanikazi u-Bitch 'kunye noJohn, NdinguMdaniso kuphela' ngelixa u-Bowie eveza ubumnandi babo. Imigca yakhe yegitare kwi 'Moonage Daydream' ijikeleze yonke ingoma, uyihlangula kwizwi elixhasayo.
Ayizizo zonke izinto uB Bowie azama ngazo USanta Monica isebenza- andikaze ndikuthande ukufundwa kwakhe okungaphezulu kukaJacques Brel's 'Ukufa kwam' kwaye kwanokuthotywa okuthobekileyo akuyitshintshi ingqondo yam. Kwaye ukuthatha kwakhe iVelvet Underground's 'Ukulinda iNdoda' -enye yeendlela ezinqabileyo- kunesimilo. Kodwa iingoma zokuvala ezibalekayo zigxotha amathandabuzo engqondweni yakho. Isixeko esineengcwangu 'iSuffragette City' sivakala ngokungathi yinguqulelo yeTurbonegro kuneZiggy enye, kunye ne-'Jean Genie 'esandula ukubhalwa sisityhilelo, esibukhali nesibukhali kwaye sinamehlo abanzi kunokuba senziwe kwirekhodi. Emva kokujikeleza iyure kwikhathalogu yokuqala kaBuyie, yena kunye nezigcawu bavakala ngokuzithemba ngokuzithemba, kuyo nantoni na.
Ngama-bootlegs kuhlala kukho umngcipheko wokudideka kunqabile nomgangatho: iintsomi ze-fan ezisebezayo zinokubuna xa ziveliswe kukukhanya kwelanga. Kodwa njengoko indoda isitsho, ukubetha kuphuma ngcono kwikatala ebiweyo, kwaye USanta Monica '72 ifumana igama layo fan. Oku kwangoko kukukrola kweqela elilambileyo kwifom eyoyikisayo, kunye nembonakalo enomdla kwinkwenkwezi evelayo.
ixesha 'n' indawo
iingoma ezintsha zerap ezintsha
jmsn nantoni na ekonwabisayo
Uluhlu lomculo wee-1960s
UScott weiland unobangela wokufa